युरेनियम के हो ? यसबाट कसरि आणविक हतियार बन्छ ? ( विध्वंसको कथा सहित) – Idea Khabar
आइडिया खबर२०७६ माघ ८, बुधबार १८:३८
आणविक बममा ऊर्जा युरेनियम र प्लुटोनियमको आणविक विखंडनबाट उत्पन्न हुन्छ। आणविक बम विस्फोटक हतियार मध्य एक प्रकारको हतियार हो जुन आणविक विखंडन वा फ्यूजन मार्फत आणविक प्रतिक्रिया प्रयोग गर्दछ। त्यस्ता हतियारहरूले ठूलो मात्रामा उर्जा उत्पादन गर्छन् र त्यसैले यसले विनाशलाई पनि निम्त्याउँछ। पहिलो आणविक बम दोस्रो विश्वयुद्धको बेला प्रयोग भएको थियो। यो घटनालाई धेरै विनाशकारी मानिन्छ किनकि एक बमले लाखौंलाई मार्ने र सम्पूर्ण शहर ध्वस्त पार्ने सम्भावना रहेको छ। परमाणु बमको बारेमा आज हामी तपाइलाइ अज्ञात तथ्यहरु जानकारि गराउने कोशिष गर्नेछौं ।
आणविक बमको बारेमा रोचक तथ्यहरू
आणविक बममा ऊर्जा युरेनियम र प्लुटोनियमको आणविक विखंडनबाट उत्पन्न हुन्छ। यसको लागि, न्युट्रनहरू परमाणुको केन्द्रकमा हिट हुन्छन्, जसले ठूलो मात्रामा उर्जा उत्पादन गर्दछ। यस प्रक्रियालाई आणविक विखंडन पनि भनिन्छ। हामी सबैलाई थाहा छ कि आणविक बम यति खतरनाक छ कि यदि कुनै ठाउँमा खसालियो भने, दशकौंसम्म जीवनको कुनै चिन्ह हुनेछैन र रूखहरू र बोटबिरुवाहरू पनि बढ्दैनन्। जापानका दुई शहर हिरोशिमा र नागासाकीमा जब अमेरिकाले आणविक बम खसाल्यो त्यसपछि जपानमा दशकौंसम्म यो अवस्था श्रृजना भयो ।
६ अगस्त १९४५ मा, संयुक्त राज्यले जापान (हिरोशिमा) मा आफ्नो पहिलो आणविक बम खसाल्यो। तीन दिन पछि,९ अगस्त, १९४५ मा, जापानको नागासाकी अमेरिकाको अर्को निशाना बन्न पुग्यो । पहिलो आणविक बमलाई ‘सानो बालक’ उपनाम दिइएको थियो र दोस्रो ‘फ्याट म्यान’ थियो। नागासाकीमा खसाइएको बम सबैभन्दा पहिले जापानको कोकुरा शहरमा छोड्ने योजना बनेको थियो तर खराब मौसमका कारण यो नागासाकीमा खसालियो। क्योटो शहरमा पनि यो बम खसाल्ने योजना रहेको थियो, तर यो ठाउँ युद्ध सचिव का हेनरी सिम्टसनले परिवर्तन गरे। संयुक्त राज्य अमेरिका युद्धमा आणविक हतियार प्रयोग गर्ने पहिलो र एकमात्र देश बन्यो।
हाइड्रोजन बम किन आणविक बम भन्दा बढी खतरनाक छ
हिरोशिमामा बम खसाइएको विमानको नाम ‘एनोला गे’ थियो र दोस्रो बम खसाएको विमानको नाम ‘बोक्सकार’ राखियो। दुबै आणविक बमहरू हावामा जमिनबाट लगभग १०० फिटको उचाईमा विस्फोट भए।
न्युक्लियर पहिलो आणविक हतियारहरू जे. रोबर्ट ओपेनहाइमरको नेतृत्वमा वैज्ञानिक टोलीले विकसित गरेका थिए। हामी तपाईंलाई बताउँछौं कि आणविक हतियारहरू दुई प्रकारका हुन्छन्: विखंडन र थर्मोन्यूक्लियर विखंडन प्रतिक्रियाहरू विखंडन बमहरू र ऊर्जा रिलीजमा प्रयोग हुन्छन्, जबकि थर्मोन्यूक्लियर बमलाई हाइड्रोजन बम वा एच-बम पनि भनिन्छ।
भनिन्छ कि जापानको दुई शहरहरूमा आणविक बम खसालिंदा परिणामस्वरूप हीरोशिमामा १४०००० भन्दा बढी मानिस र सन्१९४५ को अन्त सम्ममा नागासाकीमा ७४००० भन्दा बढी मानिस मारिएका थिए हजारौं मानिस अझै विकिरण रोगबाट ग्रस्त छन्।
हीरोशिमामा बम विष्फोटको कारण १५००० टन टीएनटीको विस्फोटनको कारण त्यहाँ ठूलो प्रभाव पर्यो, जसको परिणामस्वरूप ७०% भवनहरू भत्किए। जब विस्फोटन भयो, ५०० मिटर भित्रमा ९० % व्यक्ति तीन हप्ता भित्र गम्भीर जलेको वा विकिरणको उच्च प्रभावका कारण मरेका थिए।
बम विष्फोटको स्थल नजिकको तापक्रम ३००००० डिग्री सेल्सियस र हीरोशिमा विस्फोटको बखत जमिन मुनि लगभग ४००० डिग्री सेल्सियस रहेको अनुमान गरिएको थियो। यो तापक्रम इस्पातलाई पग्लन पर्याप्त छ। आक्रमणले प्रति घण्टा १००५ किलोमिटरको गतिमा आँधीबेहरी ल्यायो र १० वर्ग किलोमिटरमा गहिरो खाडलहरू बन्यो र ५०० मिटरसम्म प्रति १९ टन्स स्क्वायर ईन्चको दबाव सिर्जना भयो । कुनै पनि विशाल भवनलाई हावामा उडाउन यो पर्याप्त थियो।
हिरोशिमाको आणविक बम विस्फोटको एक महिना पछि, एउटा चक्रवात पनि आयो र शहरमा करीव २,००० व्यक्तिको मृत्यु भयो। म तपाईंलाई यहाँ बताउन चाहन्छु कि अमेरिकीमा १०% बिजुली विघटित आणविक बमबाट बनेको छ।
न्यू मेक्सिकोमा एउटा आणविक बम संग्रहालय छ, यसको मिसन अमेरिकाको आणविक इतिहास र विज्ञानको स्रोतको रूपमा काम गर्ने छ। संग्रहालय प्रति वर्ष १२ घण्टा मात्र खुल्छ। सन् १९५० को दशकमा, लास भेगासलाई मिस आणविक बमको ताज लगाईएको थियो।
जापानका राजा हिरोहिटोले नागासाकी आणविक आक्रमणको ६ दिन पछि अमेरिकी सेना समक्ष आत्मसमर्पण गरे। भनिन्छ कि जापानले आत्मसमर्पण गरेन भने अगस्ट १९ मा अमेरिकाले अर्को शहरमा आणविक बम खसाल्ने योजना बनायो । अब तपाईंले थाहा पाइसकेको हुनुपर्‍यो कि आणविक बम के हो र हिरोशिमा र नागासाकीमा कसरी आणविक बम खसालियो र यसको नतिजा के भयो।